भारतमा पनि भेटियो को-राेनाको ‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’, उच्च सतर्कता अपनाइदै ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियभारतमा पनि भेटियो को-राेनाको ‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’, उच्च सतर्कता अपनाइदै !
भारतमा पनि भेटियो को-राेनाको ‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’, उच्च सतर्कता अपनाइदै !
भारतमा पनि भेटियो को-राेनाको ‘ओमिक्रोन भेरिएन्ट’, उच्च सतर्कता अपनाइदै ! दक्षिण अफ्रिकामा को- रोना भाइरसको नयाँ ‘भेरिएन्ट ओमिक्रोन’ देखापरेपछि भारतमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार सम्बन्धित अधिकारीहरूको आपतकालीन बैठक बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा छुट दिने नीतिको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीले को- रोनाविरुद्धको खोपलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न निर्देशन दिए ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि को- रोनाको नयाँ भेरियन्टबाट प्रभाविकत मुलुकहरूसँगको उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् । मोदीले निकै प्रयत्नपछि मुलुकले को- रोनाको प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै नयाँ भेरियन्टबाट भारतलाई जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु पर्ने बताए ।
को-रोना भाइरस बाट एकैदिन १६४ जनाको मृ`त्यु !